Concord flyght ပြဿနာများ
ပေါင်းစည်း Concord flyght ပြဿနာများ
2 နှစ်ပေါင်း9months ago #713 by casbad
တစုံတယောက်သောသူသည် The Concorde ပျံသန်းပြဿနာတစ်ခုရှိပါသလား ငါသည်ဤမျက်မှောက်မှရတယ်တ .... ငါ့ကိုသတ်အံ့သောငှါ (လေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွင်းမှာပြန်ပြီးနှင့်လှုပ်ခြင်းနှင့်ဘက်စာရွက်များ) ကြိုးစားနေသည်
2 နှစ်ပေါင်း9months ago #714 by Dariussssss
ဒီမှာလေယာဉ်တွေအများကြီးပျက်နေတယ်။ Concorde သည်အဆင်ပြေသော်လည်း၊ ဗဟုသုတများစွာလိုအပ်သည်။ မင်းဆီလောင်စာဆီတစ်ချိန်လုံးလွှဲပြောင်းပေးရမယ်။ ၎င်းသည်တည်ငြိမ်ပျံသန်းရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
2 နှစ်ပေါင်း9months ago #716 by Gh0stRider203
yeah သူတို့အဲယားဘတ်စ်နေ cuz ကျိုးပဲ့နေတဲ့! ငါဘိုးအင်းရှိထက် LOL ငါတစ်ခု Airbus လေယာဉ်တစ်စင်းနှင့်အတူပြဿနာများအကြောင်းကိုပိုမိုပို့စ်များကိုမြင်ရပါတယ်ကျိန်ဆို
2 နှစ်ပေါင်း9months ago #720 by casbad
Dude !!!! လောင်စာဆီလွှဲပြောင်းမှုစနစ်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲသိလား။ ငါနှင့်အတူ fiddling ကြိုးစားကြည့်ဖို့အများကြီးရှိသည်နှင့်အဖြူရောင်ဆော့ ... စာဖတ်ခြင်းပစ္စည်းရှိပါသလား?
2 နှစ်ပေါင်း3months ago #947 by DRCW
စူပါ sonic ပျံသန်းမှုကိုမဆိုပုံဖော်တင်ဆက်သကဲ့သို့, Concord အားလုံးအတူတကွကွဲပြားခြားနားသောသားရဲတကောင်သည်။ ဆွဲငင်အား၏ဗဟိုတွက်ချက်ရမည်။ လေယာဉ်၏အရေပြားသည်အမြန်နှုန်းနှင့်မြင့်တက်လာသဖြင့်အမြင့်ကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ သင်၏ဆွဲငင်အားကိုဗဟိုပြုရန်ခရီးသည်နှင့်အိတ်များကိုတွက်ချက်ပါ။ လိုင်းပေါ်ရှိလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုဖတ်ပါ။ လေယာဉ်အကြောင်းကိုလေ့လာပါ။ လေယာဉ်ပျံမှာအသံချို့ယွင်းချက်ရှိသည့်နားရွက်ကိုတိတ်တဆိတ်ဖွင့်ထားသောတေးသီချင်းဖြင့်မှားနေသည်။ ဖန်တီးသူက၎င်းဖိုင်ကိုလေယာဉ်အသံဖိုင်တွဲထဲတွင်မှားယွင်းစွာထည့်လိုက်သည်။ ၎င်းကိုဖယ်ရှားရန်အသံဖိုလ်ဒါကိုဖွင့ ်၍ မကောင်းသောဂီတလမ်းကြောင်းမတွေ့မချင်းအသံနမူနာများကို ဖြတ်၍ ၎င်းကိုညာခလုပ် နှိပ်၍ ဖျက်ပါ၊ အားလုံးအဆင်ပြေမည်။